Kaayyoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo Galmaan Gahuuf Warraaqsi Jabaachuu Qaba! – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooKaayyoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo Galmaan Gahuuf Warraaqsi Jabaachuu Qaba!
Kaayyoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo Galmaan Gahuuf Warraaqsi Jabaachuu Qaba!
Koree Qindeessituu Warraaqsa Galaana Uummataa (KQ-WGU)
As dhihoo kana hiriirri humna siyaasaa Gaanfa Afrikaa kan jijjiiru dandahu hirmaannaa siyaasaa ilmaan Oromoon akka ta’e firaafis diinafis ifa ta’ee jira. Haga har’aatti, hirmaannaan siyaasaa ilmaan Oromoos dhiigaa fi lubbuu ilmaan Oromoon sirni faashistii fi abbaa irree sadii diigamus mirga abbaa biyyummaa Oromoo hin mirkanaahiin jira. Kunis, sababa jaaramayaa jabaa naamusaan wal abboomuu, waraana humna halagaa caalu fi hojii diplomasi gahaan itti milkaahuu hanqachuun, hiree biyya ofii dhuunfachuu of irra dabarsaa har’a geenye. Bara odeessaa kana keessattis, addunyaan odeessa wal qixa walii qooduun fi teknology itti dhimma bahuun qabsoo bilisummaa Oromoof aanjaan guddaa uumee jira. Haala kanaan, diinni rifaatuu guddaa keessaa seenteef, tarsiimoon itti Oromoo ukkaamsuuf murteeffatan Oromoo akka sabaatti dhabamsiisuu, Oromiyaa akka biyyaatti diiguu fi Oromummaan akka eenyummaa Oromoo hin taane itti duulanii Oromoo qalbii cabsuu ture.
Galata qabsawota qaroo fi dargaggoota keenya dafqa, dhiiga, lafee fi lubbuu qabsoo bilisummaa Oromoof kennanii, akeeki diinaa fashalee jira. Uummati Oromoo akka hin dhabamne qawwee kaasanii diina kukuffisaa jiru, Oromiyaan akka hin diigamne hidhatanii waardiyyaa dhaabbachaa jiru, Oromummaanis akka hin dhabamne kaayyoon wal qaranii wal babbaasuun Oromummaa dhaloota dhaalchisaa jiru. Haala kanaan, sagantaan Ergamtoota nafxanyaa PP fi ABO-WBO wal fudhachuu dadhabuun lolli hamtuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jira. PPn abdii kutannaadhaan gargaarsa Eritra kadhachuun loltuu Eritrea Oromiyaatti bobbaasuun ajjeechaa fi saamicha uummata keenya irratti gaggeessaa jira. Oromoon haala kana callisee ilaaluun du’a fi hidhaa itti hammeesse malee irraa dhaabuu hin dandeenye.
Humni Ertrea fi PP sanyii duguggaa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru, humni kun Kibba Oromiyaa; Gujii, Dhiha Oromiyaa; Wallagga Horroo Guduruu, Kaaba Oromiyaa; Walloo Kamise fi Gidduu Galeessa Oromiyaa; Kaaba Shawaa fi Finfinnee keessatti faanni isaanii mul’atee jira. PPn humna Eritra irra dabartee deeggartoota Fashisti Dargii humna Raashaa fi China akka kadhachaa jiraachuunis suuraa hiriira deeggarsaaf lukkeeleen PP qabatanii Finfinnee keessatti mul’atan irraa hubachuun dandahama. PPn aangoo namoota dhuunfaa fi murnaaf jecha biyyaa, qabeenya biyyaa fi uummata halagaatti gurgurachaa jiru.
Haa ta’uuti, humnooti gara dhihaa kan akka USA fi Awropa PP irraa fuula garagalfachuun rakkoo Itiyophiyaa keessa jiru furuuf humna waraanaa fayyadamuuf fedha qaban agarsiisaa jiru. Sababaan guddaa isaan himan ammoo falmaa uummataa fi mootummaa gidduutti ta’aa jiruun mirgi dhala namaa waan sarbameef akka ta’e hubatamaa dha. Oromiyaa bakkoota hedduutti sarbaminsi mirga dhala namaa raawwates gahaatti gurra argachuu hanqachuun gaaffii ta’us, falmaa hadhaawaa gaggeessuu fi addunyaatti iyyachuun akka addunyaan namaaf birmatu karaa saaqu, akkasumas tarkaanfii fi dhiibbaa guddaa uumu akka dandahu irraa barachuun dandahama. Tarkaanfiin Amerikaa fi Awrophan fudhatan kan seenaa keessatti mul’atee hin beekne dha. Har’a yakkamtooti qondaaloti mootummaa Eritrea fi Itiyophiyaa akka garaa isaanii addunyaa keessaa hin sochoone ugguramanii jiru, gargaarsa dinagdee akka durii sochoosanii meeshaa waraanaa itti bitatanis hin qaban. Wareegamnii fi iyyannaan uummataa gurra argachaa jira.
Kanaaf, Oromoon Warraaqsa jabaa gaggeessuun, diina sochii dhorkuun bilisummaa isaa goonfachuu malee fala biraa hin qabu. Warraaqsi meeshaa guddaa ittiin abbaa irree jigsan akka ta’e Oromoon marsaa sadiif argee jira. Ammas yeroo ijii fi gurri addunyaa Itiyophiyaa irra jiru kanatti sosso’uun murteessaa dha. Waan ta’eef, qabxiilee armaan gadii irratti fuulleffatamee:
Ejjennaa USA fi Awropan PP irratti fudhatan deeggaruu fi wal barsiisuu, bakka hedduutti lafaa fi gamoo bakka mul’atutti katabuu. Suuraa kaasanii FB fi media hawaasummaa irra maxxansuu. Fknf. ‘’We respect the diction of USA and EU on Ethiopia,’’ ‘’ NATO and security council should save the life of children and women’’ ‘’We Love OLA’’ fi kkf
Sochii keessatti akka gaga’amni guddaa hin dhalanne eeggachaa, karaalee gurguddaa Jibuutii, Somaliya, Sudaan, Keenyaa fi Eritrea irraa biyyaa seensisanii fi baasan, akkasumaas Finfinnee seensisaan hunda ugguruu irratti fuulleffachuun fardii dha.
PPn magaalota keessa maadheffattee konkolaataan sosso’uun uummata basaasti, hidhattoota uummatatti bobbaasti waan ta’eef, bobahaan Oromiyaa keessa galu hundi karaa irratti ibidda itti shiduu irratti fuulleffachuun barbaachisa.
Qabeenya Oromoo manatti ittisuun akka diinni Oromoo hagabu, laafuu fi jigu irratti fuulleeffachuun feesisa. Namni qawwee baatu nyaata malee jireenya hin qabu, qaama rasaasa sitti dhukaasuf; bishaan, midhaan, dhadhaa, loon, aannanii fi damma itti guurun yakka. Keessattu magaaloota PPn keessatti maadheffatte hunda irraa midhaanii fi bishaan irraa kutuun dirqama ta’uu qaba.
Ilmaan Oromoo fi saboota cunqurfamoo beekaas ta’e wallaalaan caasaa diina keessa jiran, karaa firaa fi fiixaa isaanii akka hojii dogoggoraa uummatatti dhukaasuu irraa deebihanii fi yakka ol’aanaa ta’uu hubachiisuu, inumaayyuu humnoota PP, Ertrea fi Humna Addaa Amaaraa kan uummata hiraarsanii fi ajjeesanitti qawwee isaanii garagalchuun uummata cinaa dhaabbachuun seenaa hojjetan gorsuu fi jajjabeessu. Yoo kana gochuu hanqatan garuu yakka hamaa akka dalagaa jiran fi yeroon itti gaafataman fagoo akka hin taane hubachiisuun barbaachisaa dha.
Waraanni PP naannoo Amaraa irraa Oromiyaatti fe’amaa jiru Oromiyaa keessatti yakka sanyii duguggaa gaggeessuuf waan ta’eef uummanni keenyi daangaa Oromiyaa tiksuun dirqama.
PPn partii seera hin beekne dha, kan uummata fixaa jiru sababaa deeggarsa uummataa hin qabne fi maseena dha. Partii maseene kanatu ilmaan Oromoo fi cunqurfamoo fixaa jira. Haala amma addunyaan itti jiru kana itti dhimma bahuun bilisummaa ofii goonfachuuf wareegama feesisu baasuun uummata ofii kabajaa itti horan malee PPn ajjeechaa uummata irraa hin dhaabdu. Kanaaf, karaan tokkichi waamicha WBO fudhatanii Warraqsa Galaana Uummataa Waxabajjii 8, 2021 irraa eegalamee gaggeeffamu keessaa qooda fudhachuu dha. Haala kanaan partiin maseenni kun yoo awwaalame bakka isaa WBOn biyya qabatee malee nagaa waaraa dhalchuun uummataa boqochiisuun hin dandahamu. Duutii fi gidiraan uummata irraas hin dhaabbatu.
Haqni Abbaatti Haa Deebitu!
QBO Bakkaan Gahuuf Warraaqsa Jabeessuun Fardii Dha!
Waxabajjii 6, 2021